waa maxay ku-habboonaanta ku-xirnaanta induction? induction yaraynta qalabka iyo siddooyinka ku habboon
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Iska ilaali Xirfadaha / waa maxay induction shrink fitting
Category: Iska ilaali Xirfadaha Tags: iibso kuleyliyaha ku habboon, nidaamyada kuleylka kuleylka, Qalabka wax-qabadka oo yareynaya, firfircoonida ayaa dillaaca kululaynta, Xeelad xirxiran, yaree giraangiraha qalabka lagu dhejiyo, yaree qalabka ku habboon, Nadiifinta mashiinka daboolka, Iska yaree qalabka geeska, waa maxay induction shrink fitting
Waa maxay ku-habboonaanta soo-yaraynta soo-gaadhisku?
Qalabka wax-qabadka oo yareynaya waa hawlgal fudud oo ku lug leh ama hoos u dhigid ama ballaadhin mid ka mid ah qayb kale si ay u keento faragelin iyo horumarinta cadaadiska, oo labada qaybood si farsamaysan isugu haysa.
Hab kasta oo lagu hubiyo qaybo ka mid ah shirarka wuxuu leeyahay faa'iidooyin gaar ah. Xaaladda isku-duubnaanta, qaybo ka sameysan bir kasta waa la soo ururin karaa: birta birta ah, birta ilaa naxaasta, aluminium illaa birta, magnesium ilaa bir, iwm. Badanaa, heerkulka ku lug leh kuleylinta ballaarinta ayaa si aad ah u hooseeya si looga fogaado isbeddelada Qaab-dhismeedka qalliinka metel-ga sida tempering ama dhalaalida. Sababtoo ah suurtagalnimada culeyska fekerka, saameynta hoos udhaca ku habboon waa in lagu qiimeeyaa shirarka muhiimka ah.
Ficil ahaan, hawlgalku waa mid fudud, oo u baahan diyaarinta ugu yar ee sagxadaha, xakamaynta ugu yar, iyo nadiifin la'aan kadib kullanka badanaa. Maaddaama ciidanka hubintu ay yihiin farsamo ahaan, qiijiyeynta maqaarka ama maqaar-gareynta ma faragelinayso, iyadoo laga fogaanayo baahi kasta oo loo qabo isticmaalka qulqulka. Qaybaha lagu uruuriyay isku dheelitirnaanta ayaa la kala saari karaa iyadoo si xushmad leh loo kululeynayo qaybta ka baxsan. Nidaamkani wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay kuleylka kuleylka leh heerkulkiisa kuleylka degdegga ah iyo saxsanaanta, u oggolaanaya beddelka qaybaha duugoobay ama hagaajinta isku dheelitirka.
Kuleylka induction badanaa waxay bixisaa faa'iidooyin gaar ah oo ku saabsan isku dhejinta. Kuleylintu waxay noqon kartaa mid gudaha ah, iyadoo siineysa ballaarin ku filan gudaha si ay u yaraato iyada oo aan kululeynin dhammaan daaqad weyn ama qayb si taxaddar leh loo farsameeyey, iyadoo la yareynayo qallooca. Kuleylkan degdegga ah, kuleylka xulashada wuxuu sidoo kale fududeeyaa kala-soocidda qaybaha isku-duuban ee hoos u dhaca, sida kor ku xusan. Intaa waxaa sii dheer, kuleylka kuleylintu wuxuu bixiyaa nidaam aan olol lahayn, dhakhso leh, soo celin ah oo lagu dari karo wax soo saarka ugu yaraan maaraynta iyo otomatiga fudud.
HLQ nidaamyada kuleylka kuleylka waxaa loo isticmaalaa warshadaha gawaarida si loo yareeyo qalabka iyo giraanta. Waxay sidoo kale u shaqeeyaan inay dayactiraan diyaaradaha, tareenada iyo gawaarida xamuulka. Nidaamyadeenna moobiillada waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo howlaha ku habboon meelaha laga baxo oo si isa soo taraysa ayaa loo isticmaalaa in laga saaro lowska waaweyn iyo boolal ku jira mashiinnada saldhigyada korontada.
Caadi ahaan, biraha ayaa ballaarin doona iyaga oo ka jawaabaya kuleylka iyo qandaraaska marka ay qaboojinayaan. Jawaabtan cabbir ee isbeddelka heerkulka waxaa loo yaqaan ballaarinta kuleylka. Induction shrink fitting waa meesha aan ugu isticmaalno saameyntan mid ku habboon ama ka saarno qaybo. Qeybta birta ah waxaa lagu kululeeyaa inta udhaxeysa 150 ° C iyo 300 ° C taas oo keenta inay balaarto una ogolaato gelinta ama ka saarista qayb kale. Goorma, tusaale ahaan, la isku xidhayo laba qaybood oo biibiile ah, hal qayb ayaa la kululeynayaa illaa dhexroorkeedu ballaadho oo ku filnaado qaybta kale. Marka qaybaha isku dheggan ay ku soo noqdaan heerkulka hareeraha, kala-goysku wuxuu noqdaa mid murugsan oo xoog leh - 'wuu yaraadaa inuu rakiban yahay'. Sidoo kale, fidinta kuleylka waxaa loo isticmaali karaa in la kala furfuro wadajirka ka hor kala daadashada.
Nidaamka xakamaynta, joogtaynta, saxnaanta iyo xawaaraha ayaa ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee hoos u dhigista ku habboon induction. Bixinta kuleylka kuleylka waa mid sax ah. Sababtoo ah kuleylka ka dhex jira qeybta, waxaad kaliya kululeysaa qeybta aad rabto inaad kululeyso, ee maahan jawiga ku hareeraysan. Iyo sidoo kale yareynta halista ugxansidaha, tani waa mid tamarta tamarta leh. Intaa waxaa sii dheer, maaddaama soo-saaristu soo saareyso kuleyl isku mid ah oo isku mid ah, tani waxay badanaa u oggolaaneysaa kuleyl yar in la isticmaalo. Xakamaynta heerkulka ayaa sax ah iyada oo si sax ah loo xakameynayo waqtiyada kor u kaca iyo heerkulka haynta. Si ka duwan qaababka kuleylka dhaqameed, soo-kicintu kuma lug laha olol qaawan. Tani waxay u oggolaaneysaa isku-xirnaanta indho-indheynta induction in loo isticmaalo dalabyo kala duwan oo kala duwan oo ku saabsan bay'adaha is-bedbeddelaya, gaar ahaan codsiyada kiimikada.
Noocyo kala duwan oo warshado ah iyo codsiyo ah ayaa ka faa'iideysan kara ku-xirnaanta ku-xirnaanta induction. Nidaamadeena kululeynta induction waxaa loo isticmaalaa warshadaha gawaarida si loo yareeyo qalabka saxda ah, dhalista iyo siddo. Waxay ka shaqeeyaan warshadaha makaanikada iyo sidoo kale dayactirka diyaaradaha iyo tareenada. Nidaamyadeenna moobiillada waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo howlaha ku xirnaanta maraakiibta iyo barxadaha badda waxaana si isdaba joog ah loogu adeegsadaa in lagu habeeyo lagana saaro lowska waaweyn iyo boolal ee ku jira mashiinnada xarumaha korontada iyo sidoo kale jihada iyo fallaaraha matoorrada koronto dhalisa.
Farsamaynta habeynta soo-gaabinta induction waxaa badanaa loo isticmaalaa hababka soo socda:
• Ku xiridda giraangiraha giraanta (jiinnada ku yaal fallaadhaha, iwm.)
• Daboolaya kombaresarada qaboojiyaha
• Morsi cajalado loogu talagalay mashiinka-qalabka
• Qaybaha wareega ee marawaxadaha.
Fives wuxuu la kulmaa qeexitaannada dhammaan noocyada tiknoolajiyadda horumarsan ee warshadaha aerospace-ka oo leh habab damaanad qaadaya xirxirida dhuumashada saxsanaanta oo ha ku sumoobayn dusha sare, gaar ahaan marka la isu keenayo qaybaha jilicsan.
Induction Isku-dhalinta Shirkada Birta Flange